Fabrizio Romano oo sheegay xilliga uu Achraf Hakimi tijaabada caafimaadka u marayo PSG iyo sababta aysan Chelsea ugu guuleysan saxiixa xiddiga Inter Milan – Gool FM
Fabrizio Romano oo sheegay xilliga uu Achraf Hakimi tijaabada caafimaadka u marayo PSG iyo sababta aysan Chelsea ugu guuleysan saxiixa xiddiga Inter Milan
Ahmed Nur June 27, 2021
(Milan) 27 Juun 2021. Naadiga Paris Saint-Germain ayaa ku dhow dhammeystirka saxiixa xiddiga dadabka difaaca kaga ciyaara naadiga Inter Milan ee Achraf Hakimi iyadoo Chelsea ay u muuqato in saxiixa xiddigan lagu garaacay.
Joornaaliistaha ka faalooda suuqa kala iibsiga ee Fabrizio Romano ayaa sheegay inay PSG iyo Inter ku wada heshiiyeen iibka Hakimi isla markaasna kooxda Faransiiska ka dhisan ay bixiso 65 milyan oo euro iyo 10 milyan oo gunnooyin ah kuwaasoo ay dib ka bixin doonto.
Sidaas darteed, naadiga Paris ka dhisan ayaa toddobaadkan gudahiisa ku jadwaleysay inuu xiddigan garabka ka ciyaara uu maro tijaabada caafimaadka si uu dhammeystiro u wareegistiisa Parc des Princess.
Dhinaca kale, Romano ayaa sheegay in sababta ay Chelsea xiddigan saxiixiisa ugu guuldarreysatay ay tahay maadaama aysan dalab rasmi ah u gudbin naadiga Nerazzuri kaasoo ku aaddan iibka Hakimi.
Si kastaba ha ahaatee, 22-sano jirka reer Morocco ayaa xilli hore soo af-jaraya waayihiisa Inter Milan kaddib hal xilli ciyaareed oo uu kooxda ka dhisan Taliyaaniga kula guuleystay horyaalka Serie A isagoo xagaagii hore kaga soo biiray naadiga Real Madrid.
Miyuu Gareth Bale ka fariisanayaa ciyaaraha xulka qaranka Wales? - Xiddiga ayaa ka jawaabay